रोलमा कति क्वार्टरहरू?
घर / पैसा, सानातिना / रोलमा कति क्वार्टरहरू?
1 क्वार्टर कति रोलमा छन्?
1.1 क्वार्टर्सको रोल्सको परिचय
1.2 क्वार्टरको रोल कति हो?
2 क्वार्टर्सको संख्यामा रूपान्तरणकर्ताहरूको रोल
3 क्वार्टर्सको बारेमा रमाईलो तथ्यहरू
3.1 क्वार्टरको १ रोल कति हुन्छ?
3.2 कपाटर र निकेल क्वार्टरको १ रोल कति छन्?
3.3 क्वार्टरको १ रोल कति हो?
4 Coinstar: रोलि Qu क्वाटरको एक विकल्प?
4.1 Coinstar को परिचय
4.2 Coinstar कसरी काम गर्दछ?
4.3 Coinstar Fees: Coinstar ले कति शुल्क लगाउँछ?
4.4 मेरो नजिक एक Coinstar स्थान खोज्नुहोस्
क्वार्टर कति रोलमा छन्?
क्वार्टर्सको रोल्सको परिचय
के तपाईं परिवर्तनको लागि बैंकमा जाँदा तपाईंको बैंक टेलरले कागजको सिक्का रोल पाउनुभयो? वा के तपाइँको बैंक खातामा केहि अनावश्यक सिक्का जम्मा गर्न चाहानुहुन्छ तर तपाइँको बैंकले जोर गरिरहेको छ कि तपाइँले रोल्ड क्वार्टर मात्र जम्मा गर्नु पर्छ? वा हुनसक्छ तपाईं आफ्नो सिक्का सor्कलनकर्ताको यात्रा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र प्लास्टिक परिवर्तनका सिक्का रोलमा राख्नको लागि तपाईंको परिवर्तनमा दुर्लभ सिक्काको सिक्का सिकार गर्दै हुनुहुन्छ।
किन क्वार्टरहरू पहिलो स्थानमा घुमाइन्छ जब कुनै बैंकको बाहिर सबै ठाउँमा सिक्काको गुणाको सट्टामा हाम्रो परिवर्तन हुन्छ? जे भए पनि, यो समयको उपभोग हो, क्वार्टरलाई सिक्का र्यापरामा राख्नु, कुनै स्थान पत्ता लगाउनु हुँदैन जुन पहिलो स्थानमा सिक्का रैपर बेच्ने कुराको लागि उल्लेख गर्नु पर्दैन। तपाईंको सिक्का नगदमा बदल्नुको सट्टा, तपाईंले वालमार्ट वा डलर स्टोरमा सिक्का रोल सिकार गर्नु पर्ने फेला पार्न सक्नुहुनेछ!
बैंकले क्वार्टरको झोलाको सट्टा क्वार्टरको रोलहरू प्रयोग गर्ने कारण यो हो कि घुम्ने सिक्काले सिक्कालाई सजिलो राख्ने र वितरण गर्ने गर्दछ। तपाईंको बैंकले उनीहरूको सिक्का संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिन्टको रोलि and र वितरण केन्द्रहरूबाट प्राप्त गर्दछ, जसले तिनीहरूलाई सिक्का रोलहरूको रूपमा पठाउँदछ। त्यसपछि बैंकले तपाईंलाई तपाईंमा फिर्ता लिन्छ जब तिनीहरूमा पास गर्दछ। यो उस्तै हो जब तपाईं बैंकमा सिक्का जम्मा गर्नुहुन्छ, तिनीहरू रोलिled सिक्का चाहन्छन् किनकि तिनीहरूलाई उनीहरूको ड्रयरमा राख्नुपर्दछ, उनीहरूलाई सिक्का बक्सहरूमा प्याक गर्नुहोस्, वा तिनीहरूलाई पुदीनाको रोलि and र वितरण केन्द्रहरूमा फिर्ता पठाउनुहोस्।
सिक्का रोलहरू प्रयोग गर्ने पक्षमा अर्को कारक गति हो। यो सामान्यतया व्यवसायहरू हुन्छन् जसलाई बैंकबाट सिक्काहरू चाहिन्छ त्यसैले तिनीहरू आफ्ना ग्राहकहरूको लागि हप्ताको प्रत्येक दिन परिवर्तन गर्न सक्दछन्। यसको मतलब तिनीहरू प्राय: दैनिक दैनिक बैंकमा दैनिक परिवर्तन आउँदछन थप परिवर्तन र जम्मा परिवर्तनहरू स collect्कलन गर्न। सिक्काको रोल गणना गर्न यो धेरै छिटो हुन्छ यो प्रत्येक सिक्कालाई व्यक्तिगत रूपमा गणना गर्नु भन्दा धेरै छ। उनीहरू भन्छन्, समय पैसा हो र सिक्का रोलले निश्चित रूपमा बैंकहरू र उनीहरूको व्यवसायिक ग्राहकहरूको पैसा बचत गर्दछ। जब तपाईं सिक्काको ठूलो परिमाणमा व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, दक्षता मामला।
क्वार्टरको रोल कति हो?
"रोलमा कति क्वार्टरहरू" भन्ने जवाफ चाहनुहुन्छ? यो जान्छ कि क्वाटरको रोलमा त्यहाँ 40० क्वार्टर्स छन्। त्यो क्वार्टरमा १० डलर हो!
के तपाईंको क्वार्टरमा एक भन्दा बढी रोल छ? तपाईंको कतिवटा क्वार्टर छ? क्वार्टर्स कन्भर्टरको संख्यामा हाम्रो क्वार्टर्सको रोल प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको क्वार्टर्सको रोलहरूलाई तपाईंसँग भएको क्वाटरको सटीक संख्यामा परिणत गर्न। तपाईंको क्वार्टरको रोल कति मूल्यवान छ पत्ता लगाउनुहोस्!
क्वार्टर्सको संख्यामा रूपान्तरणकर्ताहरूको रोल
क्वार्टर्स कन्भर्टरको संख्यामा हाम्रो क्वार्टरको निःशुल्क रोल प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको क्वार्टर रोलहरूलाई चाँडै तिनीहरूको भित्र क्वार्टरको सटीक संख्यामा बदल्न। हामी १ क्वाटर रोलमा टाइप गर्छौं जसले हामीलाई कुल quar० क्वार्टर दिन्छ। यसले तपाईंको प्रश्नको जवाफ दिन्छ "रोलमा कति डाईम्स" र यदि तपाईंले quar० क्वार्टरहरू छान्नुभयो भने तपाईं सहि हुनुहुन्छ! Quar० क्वार्टर्सको मूल्य कति छ? यदि तपाईंले $ १० जवाफ दिनुभयो भने, तपाईं फेरि ठीक हुनुहुनेछ। तपाईं हाम्रो कन्भर्टर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं क्वार्टरको रोल कति मूल्यवान छ भनेर फेला पार्न।
तपाईंसँग कति क्वार्टरहरू छन् र उनीहरू कति लायक छन् भनेर पत्ता लगाउन, तपाईंको क्वार्टरमा कति रोलहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्। क्वार्टर्सको संख्यामा रूपान्तरणको हाम्रो रोलले तपाईंलाई बताउँछ कि तपाईंसँग कति क्वार्टरहरू छन् र उनीहरू कति मूल्यवान छन्। क्वाटरको क्वार्टरमा रोलहरू सजिलो भयो, तपाईंसँग क्वार्टरको कति रोलहरू छैन। क्वाटरको १ रोल वा क्वार्टरको १०० रोल, हामी तपाईंको क्वार्टरको रोललाई कुनै समयमै क्वार्टरको सटीक संख्यामा बदल्नेछौं।
क्वार्टर्सको बारेमा रमाईलो तथ्यहरू
क्वार्टरको १ रोल कति हुन्छ?
१ 1965 since5.670 देखिको सबै क्वार्टरहरू ठीक exactly..0.2० ग्राम तौल जो ० औंस बराबर हुन्छ। यसको मतलब quar० क्वार्टर्स ($ १०) जुन हामीमा हाम्रो रोल क्वार्टरमा २२ 40..10 ग्राम छ! ग्रामको साथ परिचित छैन? २२226.8..226.8 ग्राम क्वार्टरको औन्स बराबर छ। औन्स क्वार्टरको ०.। पाउन्ड जस्तै हो। त्यसो भए तपाईंसँग प्रत्येक रोल क्वार्टरमा ०. 8 पाउण्ड तौल र अधिक सिक्का र्‍याप्टरको लगभग नगण्य वजन तौल हुनेछ।
यदि तपाइँ र्यापर सहितको वजन थाहा पाउन आवश्यक छ भने, सिक्का रैपर निर्मातासँग जाँच गर्नुहोस् वा खाली सिक्का र्यापर आफैमा तौल गर्नुहोस्। यो किनभने सिक्का रैपरको वजन निर्माताले फरक पार्दछ। जबकि एउटा सिक्का र्याभरको तौल फरक हुन सक्दछ, पैसा पनि कहिले क्वार्टर गर्दैन! यो सँधै .5.670..XNUMX० ग्राम छ।
कपाटर र निकेल क्वार्टरको १ रोल कति छन्?
क्वार्टर्स मुख्यतया तामा हुन् तर निकलबाट बनेको हुन्छ। सटीक हुनको लागि, हाम्रो आधुनिक दिनको क्वार्टरहरू 91.67 १..8.33% तांबे र .1965..90% निकल छन्। यद्यपि यो सधैं यस्तै थिएन! १ 10 .40 भन्दा पहिले, क्वार्टरहरू% ०% चाँदी र १०% तामाको थियो। Rol० क्वार्टर (१० डलर) को साथ एक रोलसोफ क्वाटरमा तपाईले २०10..207.9 ग्राम तामा र १ hand..18.9 ग्राम निकल राख्नु भएको छ। यदि तपाईं औन्समा काम गर्न रुचाउनुहुन्छ भने त्यो .7.333..0.333 औंस तांबेको र XNUMX औंस निकल हो।
के परिवर्तन भएको छैन कि प्रत्येक क्वार्टर अझै २ exactly सेन्टको लायक छ, यद्यपि तिनीहरू चाँदीबाट बनेका छैनन्। यो सहि छ, क्वार्टरहरू चाँदीबाट बनाइन्थ्यो! वास्तवमा विगतमा त्यहाँ धेरै चाँदीका सिक्काहरू थिए तर आज त्यस्तो छैन। यदि तपाईं सिक्का स to्कलन गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं चाँदीका सिक्का वा त्रुटि सिक्का स collecting्कलन गरेर सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
क्वार्टरको १ रोल कति हो?
आधुनिक दिनका क्वार्टरहरू १.1.75 mm मिलिमिटर मोटा छन् जुन ०.0.0689 inches इन्च बराबर छ। यदि हामीले जमिनबाट सुरु गरेर 40० कोठामा स्ट्याक ग .्यौं भने, हाम्रो क्वार्टर 70० मिमी उचाइमा पुग्नेछ। त्यो c सेन्टीमिटर अग्लो छ! यदि तपाईं इन्च रुचाउनुहुन्छ भने, तपाईंको quar० क्वार्टर २.7 इन्च लम्बाईमा पुग्नेछ। यसको मतलब क्वार्टरको रोल २.40 ​​inches इन्च लम्बाई हो र अधिक सिक्का र्‍यापको मोटाईमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं आफैं यो लम्बाई जाँच्न चाहनुहुन्छ भने, एक शासक वा टेप उपाय प्रयोग गर्नुहोस्।
Coinstar: रोलि Qu क्वाटरको एक विकल्प?
Coinstar को परिचय
यदि तपाईं तपाईंको अनावश्यक सिक्का नगद वा ईगिफ्ट कार्डमा परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले सिक्स्टारको बारेमा सुन्नुभयो। यदि तपाईंसँग छैन भने, यो एक स्वचालित सिक्का गणना मशीनरी हो जुन तपाईंको परिवर्तनलाई नगद वा eGift कार्डमा परिवर्तन गर्दछ धेरै लोकप्रिय अनलाइन स्टोरहरूबाट शुल्कको लागि। तपाईं आफ्नो सिक्का दान गर्न छनौट गर्न सक्नुहुनेछ!
Coinstar कसरी काम गर्दछ?
तपाईं Coinstar मेसिनमा रहेको भण्डारबाट नगद चाहानुहुन्छ वा उपहार भाउचर, तपाईंको सिक्कामा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा उठाउनुहुन्छ, Coinstar ले तपाईंको सिक्का गणना गर्दछ, र तपाईं आफ्नो छापिएको रसिद वा eGift कार्ड भाउचर लिनुहुन्छ। यदि तपाईंले स्टोर विकल्पमा नगद छान्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो भाउचरलाई ग्राहक सेवामा लैजानुहुन्छ र तिनीहरूले स्थानमा नगदको लागि आदानप्रदान गर्नेछन्।
Coinstar Fees: Coinstar ले कति शुल्क लगाउँछ?
Coinstar ले लिने शुल्कहरू स्थान अनुसार फरक हुन्छन् र तपाई eGift कार्ड वा नगदी चाहानुहुन्छ। तपाईले प्राय: तपाईका सिक्का एक eGift कार्डको नि: शुल्क बदल्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं नगद चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँ सामान्यतया एक 11.9% शुल्क छ। यसको मतलब डाइम्समा प्रत्येक १० डलरको लागि, Coinstar ले $ १.१। ले तपाईंलाई $ 10१ को साथ छोड्नेछ।
मेरो नजिक एक Coinstar स्थान खोज्नुहोस्
के तपाईले निर्णय गर्नुभयो कि तपाईले क्वेस्टार मेशिन प्रयोग गर्नुभयो तपाईको क्वार्टरमा रोल गर्न भन्दा तपाईले समस्याको समस्या हटाउनको लागि? तपाइँ कसरी नजिकै पसल फेला पार्नुहुन्छ तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि एक डाइम रोलमा कति डाईम्स छन्? यहाँ उत्तर खोज्नुहोस्, हाम्रो डाइम रोल्स डलर रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, र तपाईंको डाइम्सको बारेमा रमाईलो तथ्यहरू। कि एक Coinstar मेशिन छ? सरल! Head to https://www.coinstar.com/findakiosk र तपाईंको ठेगाना वा जिप कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्। अर्को, तपाईंको नजिकको सब भन्दा सुविधाजनक स्थान छान्नुहोस् र तपाईंको परिवर्तनलाई नगदमा बदल्नुहोस्।
डलररमाइलो तथ्यक्वार्टरको बारेमा रमाईलो तथ्यहरूपैसा ट्रिभियाचौथाईक्वाटरको क्वाटर कन्भर्टरको रोलट्रिभिया प्रश्नहरू पैसासानातिना